အသက် ၂၁ - တိုးတက်မှုကောင်း (HOCD) - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်ပေါ်
[ခေတ် 21, တစ်နှစ်အစီရင်ခံစာ] ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်တွင်ဤမျှကာလပတ်လုံးမဖော်ပြခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏စွဲလမ်းမှုနှင့်အတူတိုးတက်မှုရှိနေစဉ်ယေဘုယျအားဖြင့်ဘဝနှင့်တော်တော်အလုပ်များနေပါသည်။
လိင်ဆိုင်ရာလိင်မှုကိစ္စနှိမ်နင်းရေးသည်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကြာကြာမနေနိုင်တော့ပါ၊ ၎င်းသည်အများစုကိုမမှတ်မိတော့ပါ။ ငါတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းငါကပထမ ဦး ဆုံးဌာန၌ကချိတ်ဆက်တယ်ဘာကြောင့်ငါ့ကိုတွေးမိ။ လိင်တူချင်းချစ်သောရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းနာရီပေါင်းများစွာအချိန်ဖြုန်းနေသူတစ် ဦး ကဲ့သို့ခံစားရသည်။
လိင်မှုကိစ္စသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတစ်ခုသည် kink တစ်ခုသာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ဦး နှောက်ကွင်းဆက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး (လိင်မှုကိစ္စ၏appearanceတ္ထိအသွင်အပြင်) နှိုးဆွမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့မှုနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ခြင်း (transwoman တွင်လိင်တံရှိသည်ဟူသောအချက်) ။ ဒါတွေအားလုံးဟာကြည့်ရှုသူရဲ့ ဦး နှောက်ထဲမှာပေါင်းစပ်ပြီး dopamine ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်စေပြီးကြည့်ရှုသူရဲ့ ဦး ခေါင်းထဲမှာထုထည်ဖြစ်စေတယ်။
အဲဒါကိုအပေါ်ချိတ်ဆက်ရရန်၎င်း၏လွယ်ကူသည်။ အဆိုပါခက်ခဲတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကချွတ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်သီအိုရီအရရိုးရှင်းပါသည်။ ၎င်းကိုမစဉ်းစားပါနှင့်သို့မဟုတ်မကြည့်ပါနှင့်။ ဒါဟာအရမ်းကိုလွယ်ကူပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါသုံးနေသမျှကာလပတ်လုံးသင်သုံးတဲ့အချိန်မှာအရမ်းခက်တယ်။
အခုတော်တော်များများကုန်သွားပြီ။ ငါလုပ်ခဲ့တာအတွက် ၉၈% သောနှိုးဆွမှုဟာပျောက်ကွယ်သွားပြီလို့ငါပြောချင်ပါတယ်။ ကျန်ရှိနေသော What'.s သည်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်သေးငယ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။
HOCD သည်ယခုအချိန်တွင်လည်းကိုင်တွယ်ရန်လွယ်ကူသည်။ ငါကြည့်နေတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံနဲ့ဆက်စပ်နေတယ်ဆိုတာသေချာပါတယ် ဒါဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ငါတော့အဲဒါကိုနောက်တဖန်မပေးတော့။ ငါစဉ်းစားတာကိုရပ်တန့်လိုက်တယ်၊ ဒီဟာပုံရသည်
ကျွန်ုပ်တွင်အလုပ်တစ်ခုရလိုသည်မှာကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရန်လှုံ့ဆော်မှုများစွာရှိသည်။ ဘတ်စကက်ဘောအကြီးအသွားသည်။ ယခုတွင်ငါသည်ငါ့မိတ်ဆွေအများစုပတ်ပတ်လည်စက်ဝိုင်းကို run ။ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းမှရရှိသောစွမ်းအင်နှင့် testosterone ဟော်မုန်းများသည်ကျွန်ုပ်အားအားကစားစက်တစ်ခုဖြစ်စေသည်။ ငါသည်လည်းဤမျှလောက်ပိုပြီးတန်းစီနှင့်ဖြေလျော့ပေးခြင်းပေါ့; လူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်သိသိသာသာမှေးမှိန်ပြီ ငါမတိုင်မီရှိခဲ့ကြောင်းအမျက်ဒေါသပြissuesနာများအများကြီးပိုကောင်းဖြစ်ကြသည်။ ငါလက်ကိုင်အလွယ်တကူမပျံသန်းတော့ပါ။
အားလုံးခြုံကြည့်လျှင်၊ ဘဝသည်ယခုအချိန်တွင်တောက်ပနေပြီ။ ကျွန်ုပ်သည် ၈ ပတ်တာကိုရှောင်ကြဉ်ရန်မပြီးသေးပါ။ သို့သော်ယခုနှစ်“ ကျရှုံးခြင်း” သည်ကျွန်ုပ်ထင်သည်ထက် ပို၍ အကျိုးဖြစ်ထွန်းခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်များစွာပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီးကျွန်ုပ်သည်အခြားလူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ကောင်းသောလမ်းအတွက်!
ညစ်ညမ်းဆေးစွဲသူများအနေဖြင့်ထပ်မံဖြစ်ပွားခြင်းအားစုစုပေါင်းရှုံးနိမ့်ခြင်း၊ သူတို့လုပ်သောအလုပ်ကိုရပ်တန့်ခြင်းဟုရှုမြင်သော်လည်း၎င်းသည်ရိုးရိုးသားသားမဟုတ်ပါ။ Relapses ကမင်းကိုအနာဂတ်မှာခုခံတွန်းလှန်ဖို့သင်ပေးတယ်။ သူတို့ကဒီဗီဒီယိုဒါမှမဟုတ်ရုပ်ပုံတွေပါတဲ့မိနစ်အနည်းငယ်ကမတန်ဘူးဆိုတာသင်ပေးတယ်။
ယနေ့ခေတ်တွင်လေးပတ် PMO အခမဲ့အမှတ်အသားပြုထားပြီး၊ ချစ်သူရည်းစားနှင့်အတူအော်ဂဇင်မပြုလုပ်သောလိင်ဆက်ဆံမှုတိုတိုမှ လွဲ၍ ဂယက်ထမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိင်ဆက်ဆံမှုအစီအစဉ်ကကျွန်တော့်ရဲ့လိင်တံထဲမှာသိသိသာသာသိသိသာသာတိုးတက်လာတယ်၊ လှုပ်ရှားမှုတိုင်း၊ လှုပ်ရှားမှုတိုင်း၊ ငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေပေါင်းစည်းလိုက်တာ၊ ပြီးပြည့်စုံကောင်းမွန်ပြီးမှော်ဆန်တာကိုကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရတယ်။ နောက်တဖန် ငါနောက်ထပ်ခြောက်ပတ်သွားပြီးအော်ဂဇင်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုရန်နှင့်ဘာဖြစ်မည်ကိုကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ (ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတကယ်ရပ်တန့်နိုင်တဲ့အစွမ်းကိုကျွန်တော်သဘောကျမိတယ်၊ တစ်ခါမှမစီမံဖူးဘူး။ သူကပြောတယ်ခက်တယ်။ ပိုပြီးတစ်ခုထက်ပိုပြီးလုပ်နိုင်တယ်!)
ED က LOADS ပိုကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကပြီးခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်တာကာလအတွင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်လည်နာလန်ထူလာတယ်၊ ပြီးတော့ငါဟာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့အတူအရမ်းကိုအဆင်ပြေပါတယ်။ သူမကကျွန်မရဲ့ပြpornနာကိုသိတယ်၊ ငါ့ကိုအပြည့်အဝထောက်ခံတယ်၊ သူမသည်သူမသို့မဟုတ်ငါ့အမှားသို့မဟုတ်ဘာမှမဟုတ်နားလည်သဘောပေါက်
ဒါ့အပြင် ED မှပြန်လည်နာလန်ထူရန်ညစ်ညမ်းခြင်းကိုရှောင်ရှားခြင်း၊ မိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်အဆင်ပြေခြင်းသည်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ plays မှပါဝင်သည်ဟုကျွန်ုပ်လုံးဝယုံကြည်သည်။ တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်ကြိုးစားသည့်အခါညစ်ညမ်းမှုကိုမစွဲလမ်းသူများသည်ငါသိသည်။ ပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့မင်းရဲ့မင်းရဲ့စွဲလမ်းမှုသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ရာအကြောင်းကိုမင်းရဲ့မိတ်ဖက်ကိုပြောပြရမယ်လို့ငါမထင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အရာဝတ္ထုတွေကိုနှေးကွေးစွာယူပြီးတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကြာကြာပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအပြုအမူတွေကိုစွဲစွဲမြဲမြဲလုပ်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးအကြံဥာဏ်ဖြစ်တယ်။ ၎င်းသည်သင်အတူတကွ ၀ င်ရောက်လုပ်ကိုင်လိုသည့်အလားနှင့်လိင်နှင့်ပတ်သက်လာလျှင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်သဘာဝနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိ၊ စိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲ၎င်း၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအစီအစဉ်လည်းရှိသည်။
လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ကကျွန်ုပ်သည်ဤအရာများကိုအလွန်နှစ်သက်လိမ့်မည်ဟုမထင်ခဲ့ပါ။ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အဖြစ်၎င်းကို“ သောင်းကျန်းသော” ပြုံးပြသည်ဟုထင်ခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်ရည်းစားကိုပွေ့ဖက်လိုက်သောအခါကျွန်ုပ်ရရှိသောခံစားချက်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုသည်မနှစ်မြို့ဖွယ်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည် ငါ porn မပါဘဲသွားကြာကြာပို။ ပင်ခံစားရတယ်။ အချို့လူများသည်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်ပြွတ်သိပ်နေတတ်ကြသော်လည်း၊
ဒါကြောင့်အခုအချိန်မှာအခြေအနေတွေအရမ်းကောင်းနေပြီ။ ငါဟာတစ်နေ့ကို ၁၅ မိနစ်လောက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတယ်။ အများအားဖြင့်ပေါ့သွားတဲ့အလေးတချို့နဲ့အတူပြေးနေတယ်။ လူအချို့ကဒီဟာမလုံလောက်ဘူးလို့ပြောလိမ့်မယ်၊ အားကစားခန်းမမှာတစ်ပတ် ၁ ရက် ၂ ရက်လောက်လမ်းပိုကောင်းတယ်။
ငါကိုယ်အလေးချိန်တက်လာပြီ၊ ကြွက်သားတွေတိုးလာပြီ၊ ငါ့အသားအရေဟာအရမ်းကောင်းတယ်၊ ငါ့မျက်လုံးအောက်ကအနက်ရောင်ကွင်းတွေကလည်းပျောက်ကွယ်သွားပြီ၊ ငါဟာပိုပြီးယုံကြည်မှုပိုရှိလာတယ်၊ မြန်တယ်၊ ပြုံးနေသည်
ယခုငါရေများများသောက်နေတယ်၊ ​​ဘာကြောင့်လည်းမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒါကငါ့ကိုတကယ်စိတ်ဓာတ်ကျစေပြီးအရင်ကသောက်ခဲ့တဲ့သောက်စရာတွေထက်အများကြီးပိုကောင်းတယ်။ သကြားပြီးနောက်ပယ်ကျီ။
- ငါအိပ်ဖို့ကြိုးစားသည့်အခါ porn flashbacks ပေါ်ပေါက်လာသည်။ သင်၏ Brainonporn မှနည်းပညာများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုရှောင်ရှားရန်နည်းလမ်းများကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေသည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်ုပ်၏ ဦး ခေါင်း၌ညစ်ညမ်းသောမြင်ကွင်းများပေါ်ပေါက်လာသည့်အခါစိုက်ထူခြင်းခံရသည်။ မကောင်းသည်၊ သို့သော် ၄ ပတ်မျှသာရှိသေးသည်။ တပ်မက်မှုများသည်တခါတရံတွင်တွားသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုထင်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနောက်တာပါလိမ့်မည်။ ဒီဟာမကြာခင်ရပ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
- အမျိုးသမီးများသည်နေရာတိုင်း၌ရှိသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ချိတ်ဆက်မိသည့်အခါ၎င်းကိုကျွန်ုပ်သတိမပြုမိခဲ့ပါ၊ သို့မဟုတ်သတိပြုမိခဲ့သော်လည်းသူတို့၌ပလတ်စတစ် Boob မရှိသောကြောင့်အာရုံမစိုက်ခဲ့ပါ။ ဒါကအရာရာကိုအတော်လေးခက်ခဲအောင်လုပ်နေတယ်၊ ​​ငါ့ရည်းစားကောင်းဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတာနဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်သည်အခြားတစ်ဖက်တွင်ဘတ်စ်ကားစီးနေစဉ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်လာပြီးကျွန်ုပ်ဘေးတွင်ထိုင်နေသည်။ သူမသည်စိတ်ကူးစိတ်သန်းအတွက်အနည်းငယ်သာကျန်ရှိနေသောထိပ်တန်းဝတ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်သင်သိသောအရာကိုပေါ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်ရရှိသောအတွက် ၀ မ်းသာပါသည်။ ငါ့အပေါင်ပေါ်မှာအိတ်ကိုအိတ်! ဘတ်စ်ကားပေါ်မှလမ်းလျှောက်ရင်းကျွန်ုပ်၏အိတ်ကိုအိတ်ကပ်ထဲထည့်ပြီးကြည့်လိုက်မိသည်။ ပြုံးနေသည်
အခြားအမျိုးသမီးများသည်လိင်မှုကိစ္စကိုအလွန်နှစ်သက်ကြသည်။ ငါကအခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့တော့သူမဆွဲဆောင်မှုကိုတွေ့တော့ငါအရမ်းစိတ်ဆိုးတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကဒါကိုလက်ခံဖို့လိုတယ်လို့ငါထင်တယ်။ ငါဘယ်တော့မှမလိမ်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်။ ငါအသက် ၂၁ နှစ်ရှိပြီ။ လေးပတ်အတွင်းလိင်မှုကိစ္စမလွတ်မြောက်သေးဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနားပေးရမယ်၊ ဒါပေမယ့်စိတ်ပျက်စရာကောင်းနေသေးတယ်။ ငါချစ်သူနှင့်အတူပျော်ရွှင်ပြီးချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိသောလိင်မှုဘ ၀ တွင်ပါဝင်နေစဉ်အခြားအမျိုးသမီးများအတွက်ဤတုန်လှုပ်ချောက်ချားမှုသည်ခဏတာမှေးမှိန်သွားလိမ့်မည်။ ရုံနှောင်ကြိုးအပြုအမူတွေကိုမှသေချာအောင်တယ်။
- တစ်နေ့တာအတွင်းအိမ်မှထွက်ရန်အခွင့်အလမ်းများမှာအနည်းငယ်မျှသာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်လအနည်းငယ်ကြာအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏နေ့ရက်များကိုကြည့်ရှုခြင်း၊ အင်တာနက်ကြည့်ခြင်း၊ တီဗွီကြည့်ခြင်းများပြုလုပ်သည်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အိမ်မှာသွားလည်တာထက်အများကြီးလုပ်ဖို့ငါ့မှာပိုက်ဆံမရှိပေမဲ့ငါ့မှာအခုလက်ရှိအလုပ်လက်မဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပဲရှိတယ်။ ဒါကြောင့်ငါကတစ်နေ့လုံးသူနဲ့ပိုတွေ့ဖို့ကြိုးစားမယ်။ ငါရည်းစားကိုတစ်ပတ် ၄ ရက်ပျမ်းမျှကြည့်တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါနဲ့အတူငါရှိနေချိန်မှာပြန်မရနိုင်တော့ဘူး။ အနည်းဆုံးတော့ porn မပါဘူး။
သတင္းေၾကညာခ်က္ by 20UK